Zava-dehibe ve ny fifandraisana eo amin'ny sehatra nomena sy ny SEO?
Araka ny voalazan'ireo Google lehibe telo lehibe, ny fampiasana tranokala, ny kalitaon'ny votoatin'ny tranonkala ary ny fiverenana an-tserasera no zava-dehibe indrindra mba hamaritana raha hametraka azy io eo an-tampon'ireo SERP, na tsy. Ary marina izany, indrindra raha jerena ny lanjan'ny liona amin'ny mpanjifa mety aminao dia mety ho ny hitsidihany voalohany ny pejy web anao avy amin'ny lisitry ny valin'ny fikarohana.
Noho izany, ny anaran'ny sehatra tsara sy ny fikojakojana SEO dia azo antsoina hoe sainam-pirenena mety ho isaky ny tranonkala. Rehefa jerena ny anarana manokan'ny olon-tsotra tsirairay dia matetika izy no manorina ny anaran'ny orinasa, manohana ireo teny manan-danja sy mandresy lahatra ary ireo andian-teny manan-danja - us tech support llc. Fa ny resaka momba ny fifandraisana misy eo amin'ny sehatry ny sehatra sy ny fiantraikany amin'ny SEO amin'ny lisitry Google dia efa foto-kevitra tena niadian-kevitra foana. Na izany na tsy izany, misy marika porofo ve ny fifandraisana mivantana eo amin'ny anarana sy ny SEO? Izany no antony nanapahako ny hanana ny hevi-dehibe manintona sy miaro amin'ny zava-misy mangatsiaka etsy ambany.
Tsy misy fitsipika henjana
Raha ny tena marina, ny fitsipika Google dia tsy nanana fitsipika henjana na fangatahana ofisialy izay ho hitantsika tsikelikely. Mazava ho azy fa manao izay tsara indrindra ny jiolahy indraindray mba hisorohana ny fanararaotam-pahefana na fanodikodinam-panambadiana, Fa zavatra iray azo antoka - araka ny ankamaroan'ny fitsapana, dia misy eo amin'ny roambinifolo isan-karazany voatanisa amin'ny algorithm farany ny famaritana ny tranonkala lisitry ny valin'ny pejy momba ny motera. Raha jerena ny fijerena sarobidy nataon'ireo mpiasa teo aloha, sy ny sisa tamin'ireo teoria sy hevitra manitikitika, dia misy ny mety ho vokatra azo avy amin'ny fananganana ny anaran-tserasera sy ny fikarakarana SEO miaraka aminy.
Diniho ny mpampiasa mivantana, fa tsy ny fikarohana robots
Azo antoka fa ny dingana tsara indrindra dia ny dingana mananontanona ny lalana mankany amin'ny fahombiazanao an-tserasera amin'ny fotoana maharitra. Ary manome toro-hevitra eto aho mba hahazoana anarana nomena anarana amin'ny sehatra voalohany sy amin'ny ankapobeny. Tsy mila miezaka manitsy tanteraka ny safidin'ny fikarohana ianao. Tsara kokoa ny mieritreritra ireo tena mpampiasa, noho izany dia manoro hevitra aho ny hanana anarana mitombina, manintona sy mahatsiaro tena, izay mety ho azo ekena sy azo ekena eto. Aza misalasala mametraka azy amin'ny anaran'ny orinasa momba ny varotra, ary koa ny teny fanalahidy mety sy ny combinaison.
Fikarohana fikarohana voamarina
Rehefa mijery azy ireo, ireo anarana nomena ireo, anisan'izany ny teny fanalahidy manan-danja izay manana tombony miavaka amin'ny sisa mpifaninana amin'ny valin'ny fikarohana Google. Efa lasa ela be ireo fotoana ireo, ary ankehitriny ny fitantanana ankapobeny ny sehatra keyword ankehitriny. Ankehitriny ny fitaovan'ny fikarohana dia mankasitraka ireo tranonkala manome lanja kokoa ny mpampiasa, i. f. , manana votoaty mendrika kokoa. Saingy mbola eo an-tserasera ny lojika taloha amin'ny sehatry ny sokajy, satria ireo fehezanteny manan-danja amin'ny anaran'ny sehatra dia mamela kokoa ny mpitsidika hampifandray ny fikarohana tsirairay sy ny votoatin'ny tranonkala. Tsy hiteny hoe ny URL toy izany dia tena ilaina kokoa amin'ny fizarana, ary ny fampitomboana ny fiantraikany tsara amin'ny sivan-tserasera. Raha manao izany ianao dia mety hamporisika ny Google handoa ny tranokalanao amin'ny laharana ambony. Noho izany, aza misalasala amin'ny fanaovana fikarohana lalindalina amin'ny teny fanao rehefa mamolavola ny anaranao vaovao. Tsy hanenina ianao, azoko antoka.